Siilaanyo oo cadeeyay in aduunyada badankeed ay dooneyso Soomaali mideysan. |
Siilaanyo oo cadeeyay in aduunyada badankeed ay dooneyso Soomaali mideysan.
Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), Madaxweynaha maamulka Somaliland, ayaa daboolka ka qaaday in beesha caalamku ay dooneyso in maamulkiisu ay la midoobaan Soomaaliya inteeda kale dadaal kasta oo ay ku bixiyeen gooni isu taagana uu suura geli la’yahay.
Siilaanyo ayaa ku sheekeeyay, “Afar dowladood oo ay kamid yihiin Turkiga, Ethioipa, Ingiriiska iyo Mareykanka ayaan socdaal ku soo maray. Intooda badan waxa aan kala kulanay jawaabo aanan jecleysan oo ah in Soomaaliyadii aan ka go’nay labaatan sano kahor aan dib ula midowno”.
Siilaanyo ayaa arintaan uga dhawaajiyay kulan ay ka qeyb galeen wasiirrada Arrimaha dibada, Madaxtooyadda, dhalinyaradda iyo Ciyaaraha, Wasiir Ku xigeenka iyo Warfaafinta oo ka dhacay Huteelka Maansoor ee Magaaladda Hargeysa uuna kula hadlayay ardayda shan jaamacadood oo ku yaala magaaladda Hargeysa ee xarunta maamulkiisa
Somaliland ayaa waxa ay wax badan baadi goob ugu jirtay in ay noqoto dowlada madax banaan hasa yeeshee ma jirin dowlad qura oo ay ka heleen carab laalaadin.